Xasan Mudey:- Dalku wuxuu ubaahan yahay isu tanaasul iyo qaanuunka oo loo hogaansamo. | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Xasan Mudey:- Dalku wuxuu ubaahan yahay isu tanaasul iyo qaanuunka oo loo...
Xasan Muuudey oo kamida lataliyayaasha madaxweynaha Hirshabelle state ayaa bartiisa facbooka kusoo daabacay talooyin uu lawadaagayay mas’uuliyiinta dalka .
“Shirkii maanta kadhacay Muqdisho ee xisbiyada labaxay “Madasha qaran” waxaan dawaday qudbooyinkii laga wada jeediyay iyo warmurtiyeedka kasoo baxay uu jeedinayay Sanatar Ilyas Ali Hassan .
Waxaa dhamaan iiga muuqatay mas’uuliyiintii ka hadashay madasha ay ku kulansanaayeen midba midkale in uu adkaa hadallada ay jeedinayeen.
1~Madaxda dowladda dalka maanta iyadaa mas’uul ka ah ,in ay muujiso xaalad siyasadeed ka duwan tan maanta ay wajaheyso, sababtuna waxaan u leeyahay hadaanu isu tanasul iyo wada tashi ku tiirsan qaanuunka noo qoran aynaan la’imaan ay suurta gal tahay dibu dhac hor leh.
2~Madaxdii hore ee maanta hadashay waxaan leeyahay mudana yaal marxaladda uu dalku marayo waliba gaar ahaan Muqdisho iyo labada shabelle intaad qiimeeysaan talo lawadaagna aad u muujisaan mas’uul kasta oo aad u aragtaan in uu diyaar u yahay dhageysigiina,si aysan bulshada Soomaaliyeed ugu sii kala fogaan akfkaaraha aad ku kala fogaateen madaxda joogta iyo idinkii shalay xilka ku wareejiyay.
3~ Hay’adda sharci dajinta dalka waxaan lawadaagayaa in ay xeeriyaan qaanuunkii 2sano iyo bar kahor gacanta ay ku haayeen uu yahay qodobada laga wada tabanayo, wixii gaabis ah ee qaanuunka ku yimaadana ay tahay mas’uuliyad darro loo sababeyn doono Baarlamaanka dalka.